UKUPHATHA KWENKQUBO YOKUPHAKATHI KUNYE NOKUHLOLA | FXCC
Ubaluleka bokuhlalutya kwi-Market Forex
Uhlalutyo lwe-market forex luvela kwiifom ezimbini ezahlukeneyo; uhlalutyo lobugcisa nolusisiseko. Iingxoxo ziye zahlaselwa ukususela ekuzalweni kwezorhwebo malunga nokuba luphi uhlalutyo olungcono, nokuba ngaba bathengisi kufuneka baqeshe udibaniso lwezo zombini, ukuze benze izigqibo zokuthengisa ezinolwazi. Uluhlu lwezobugcisa kunye nolwaphulo olusisiseko luphikisana nento ebizwa ngokuba yi-"hypothetical-market hypothesis", echaza ukuba amaxabiso emarike awanakulinganiswa.
Nangona iingxoxo ziqhutyelwe iminyaka emininzi malunga nokuba luhlobo luni lokuhlalutya lulungileyo, enye ingxaki yazo zonke iingcali zorhwebo kunye nabahlalutyi ziyavuma ukuba zombini iifom zinempawu kwaye zixhamla ezinokukunceda abahwebi. Abahlalutyi baya kuvuma ukuba kungathatha ixesha lokuphila kunye nokusebenza ukuba ube ngumfundi kwiphina, okanye zombini iifom zokuhlalutya. Ukusetyenziswa kohlobo oluchanekileyo lokuhlalutya lobugcisa bebuyile kwi-1700 ngabathengisi nabadayisi baseDatshi, ngelixa ukuhlaziywa kwamakhandlela kuthiwa kwaqala e-China kwiklasi yeshumi elinesibhozo, kuhlonipha indlela eyenziwe ngu-Homma Munehisa, ukucacisa imfuneko yezinto eziphambili ezifana nelayisi.
Abaninzi abahlalutyi basisiseko baya kugxotha uhlalutyo lobugcisa, bathetha ukuba uninzi lwezibonakaliso zezobugcisa alukwazi kwaye alusebenzi, kuba izibonakaliso "zizalisekisa kwaye zilahla". Basenokungabaza ukuba amaxabiso afanelekileyo asetyenziswa ngokuqhelekileyo afana ne: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (i-stopbrebolic stop) kunye neebhola zeBollinger njl. Nangona kunjalo, baninzi abahwebi abasebenzisa uhlalutyo lobugcisa kwisicwangciso sabo sokuthengisa , ngubani oza kuchaza ngokucacileyo ukuba usebenzisa izikhombisi, ukungena kunye nokuphuma kwimisebenzi yabo, ngokwenene usebenza. Ngelo xesha, kodwa ngokubhekiselele kwintsebenzo kunye nokusebenza okuphakathi, uhlalutyo lwabo lobugcisa lusebenza kakuhle ngokwaneleyo ngexesha lokuqinisekisa ukuba baye bavelisa isicwangciso sokuthengisa esithembekileyo kunye nesicwangciso, "umgca" njengoko abathengisi bahlala bebhekisela kulo.
Nangona kunjalo, kuyimangalisa ukuba phantse bonke abahlalutyi-abathengisi-basebenzi baya kusebenzisa iindlela zokuhlalutya lobugcisa, kwimeko ye-vanilla, isatifiketi esingafaniyo. Baya kuthi mhlawumbi bathathe isigqibo sokuba yeyiphi indlela yokubonisa intengo abakhethayo: isibane, isibani, i-Heikin-Ashi, umgca, iipin-bar, njl. Okanye baya kusebenzisa isicwangciso esilungileyo sokuthengisa kuquka: i-lows ephezulu, i-low -s, i-headings, ne-shoulder Iipateni, ama-fractals, amaphuzu okubaluleka, ukubuyiswa kwe-Fibonacci kunye nokudweba umgca wendlela. Emva kokuba ezinye zefomula zifakwe kwitshathi, ishati ibonakala ngathi ixakeke njengetshathi equlethe ezininzi zibonisi ezikhankanywe ngasentla. Kwaye azinako ukubala ukuba kuphi ukuma kwaye uthathe imiyalelo yokukhawulelana neproft kunye neendlela zohlalutyo lobugcisa?
Ngoko ke ukuhlalutya okucwangcisiweyo okubalulekayo kusenokwenzeka ukuba basebenzise uhlalutyo lobugcisa, baya kukhetha ukugxila kwiindaba, iziganeko kunye nokukhishwa kwedatha ukwenza, okanye ukuhambisa izigqibo zabo. Kwaye baya kuhlala bengenazo zonke iikopi, mhlawumbi ngokusebenzisa i-Twitter, okanye ukuhlawula imali eyongeziweyo yokusebenzisa oko kubizwa ngokuba yi "squawk", ngenzame yokuba ngaphezulu kweemarike kunye nezigqibo zabo zokuthengisa.
Nangona kunjalo, eli candelo lendawo yethu ayikho ukuxubusha imilinganiselo enxulumene nokuhlalutya okuphambili kunye nobugcisa, sihlakulela isikolo seFX apho siya kwenza okokude, siza kunika umboniso omfutshane weengcaciso eziphambili phakathi iindawo ezihlukeneyo zohlalutyo.
Yintoni i-Forex Technical Analysis?
Uhlalutyo lobuchwephesha (olubizwa ngokuba yi-TA) lukulinganisela ukunyuka kwentengo yexesha elizayo ngokusekelwe kuviwo lokuhamba kwamanani adlulileyo. Uhlalutyo lobugcisa lunokunceda abahwebi balindele ukuba kwenzeka ntoni kumaxabiso ngamaxesha. Uhlalutyo lobugcisa lusebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye neetshathi ezibonisa ukuhamba kwamanani kwixesha elikhethiweyo. Ngokuhlalutya iinkcukacha ezihlanganiswe kwimisebenzi yokurhweba, njengento yokunyuka kwentengo kunye nomthamo, abahwebi banethemba lokuthatha isigqibo malunga nokuba yeyiphi intlawulo engayithatha.
Uhlalutyo oluninzi lwezobugcisa-abahwebi bahlawula ingqalelo kwiindaba. Bathi bajonga ukuba ekugqibeleni iinkcukacha kunye mhlawumbi nomdlalo weendaba zokukhululwa kwezoqoqosho, ekugqibeleni zizityhila kwitshati. Enyanisweni, intengo kwitshathi iyakwazi ukusabela ngaphambi kokuba abahwebi baye babone idatha ededelwe, okanye babe nethuba lokufunda iindaba kwaye benze isinqumo esineenkcukacha. Oku kunokuba ngumphumo we-algorithmic / abaphezulu abahwebi abahamba phambili bekwazi ukuhamba phambi kweendaba ngokukhawuleza kwelanga phambi kokuba abahwebi abaninzi abafayo bangasabela.
Yintoni i-Forex Fundamental Analysis?
Abahlalutyi abaphambili bavavanya ukubaluleka kwangaphakathi kwintalo-mali, ekugqibeleni oku kufuna ukuba uviwo olufutshane malunga neemeko zoqoqosho ezibhekiselele kuqikelelo lwemali yesizwe. Kukho izinto ezininzi eziphambili ezidlala indima ekuhambeni kwemali, ezininzi zazo ziqulethwe kwizinto ezibizwa ngokuthi "izikhokelo zoqoqosho".
Izalathisi zoqoqosho zineengxelo kunye nedatha ekhutshwe likarhulumente welizwe, okanye iqumrhu elizimeleyo njengeMarkit, elichaza ukusebenza kwezoqoqosho kwelizwe. Iingxelo zezoqoqosho zindlela iindlela zezoqoqosho zelizwe eziqhelekileyo zilinganiselwa ngayo. Ukukhutshwa kwixesha elihleliweyo idatha inikezela ngeemarike ngokubonisa inkcazo yezoqoqosho kwilizwe; Uphuculwe okanye unqatshelwe? Kwi-FX yorhwebo, nayiphi na ukuphambuka kwi-median, idatha edlulileyo, okanye kwizinto ezichazwe ngaphambili, kunokubangela intengo enkulu kunye nokuhamba kwevolumu.
Nazi ezinye iingxelo ezine eziphambili ezinokuthi (ekukhululweni) ixabiso lemali epheleleyo
I-GDP yinkalo enkulu kunazo zonke zoqoqosho lwelizwe; ixabiso lexabiso lemarike yazo zonke iimpahla kunye neenkonzo eziveliswa kweli lizwe ngelixesha elichasiweyo. I-GDP igxininisa, ngoko ke abathengisi bavame ukugxila kwiingxelo ezimbini ezikhutshwe ngaphambi kokuba i-GDP ye-FAL iguqule; ingxelo ephakamileyo kunye nengxelo yokuqala. Ukuhlaziywa phakathi kwezi ngxelo kungabangela ukungazinzi okukhulu.
Iintengiso zentengiso 'iingxelo zeerhafu zeevenkile zonke zeentengiso kwilizwe elithile. Ingxelo yinkalo efanelekileyo yendlela yokusetyenziswa kwemboleki, ilungelelaniswe ukuguquguquka kwexesha. Ingasetyenziselwa ukuqikelela ukusebenza komqondiso wokubaluleka obaluleke ngakumbi kunye nokuvavanya ulwalathiso olukhawulezayo loqoqosho.
Utshintsho kwimveliso: iifeksi, iimigodi kunye nezibonelelo ezisemgangathweni lwezoqoqosho zingabonisa lonke impilo yezoqoqosho. Ikwazisa kwakhona amandla abo; kwinqanaba apho umbane ngamnye okanye amandla asetyenziswayo asetyenziswa. Ngokufanelekileyo isizwe sifanele siphumelele ukwanda kweemveliso, ngelixa sisondele ekumgangatho walo.
Abathengisi basebenzisa le nkcukacha bahlala bebeka iliso ukuveliswa komsebenzi, onokuba yinkanuko njengemfuneko yamandla, ichatshazelwa yimozulu. Ukuhlaziywa okubalulekileyo phakathi kweengxelo kungabangela ukutshintsha kwemozulu, okubangele ukungabi nantoni kwimali yesizwe.
I-CPI ilingisa utshintsho lokunyuka kwamaxabiso kumanani wabathengi kwiimpahla. amaqela amabini ahlukeneyo. Le ngxelo ingasetyenziselwa ukubona ukuba ilizwe lenza okanye lilahle imali kwimveliso kunye neenkonzo. Ingasetyenziselwa ukuchonga ukuba ingaba i-bhanki okanye urhulumente ophakathi okanye oya kuphakamisa okanye ukunciphisa amazinga omdla osezantsi, ukupholisa okanye ukukhuthaza uqoqosho.